health care reform act bill text: manfaat apel cuka
manfaat apel cuka Apple bụ na mkpụrụ osisi ahụ dị ụtọ na nke ukwuu ọhụrụ iji kpochapụ agụụ dị ka dragọn mfri. Kandunagn apụl nwere eriri nke dị elu zuru oke nke mere na ọ bụ ihe ọma n'ihi ibu ọnwụ nri usoro . Ọtụtụ nri ndị ọkachamara na ịkwado apụl dị ka ndị ọzọ oriri iji na-enweta ezigbo ahu .
Ọ bụghị naanị na ihe ọma n'ihi nri naanị , udara na mma -eri na -eme kwa ụbọchị iji nọgide na-enwe ahụ ike idem. E nwere dị iche iche na ụdị ọrịa ahụ nwere ike kwara ma gbochie iji nke a ụtọ mfri. Ntre nso idi ufọn na nrụpụta ọrụ nke apụl ? Na-aga na-ahụ zuru nyochaa n'okpuru:
Apụl nwere ike inyere belata ihe ize ndụ ndị nkuume cancer
Nke a nwere ike ime n'ihi na flafoid bekee ẹdude ke apụl . Flafoid bekee pụtara iji nyere aka belata ihe ize ndụ ndị nkuume cancer site na 50 %. Site na -amụ Cornell University dị na United States, chọpụtara na phytochemical bekee ke skins apụl ike inhibit uto nke ịrịa ọrịa cancer eriri by 43 %.
Ihe ọma na ntutu
Apụl ike discolor ntutu. Apụl ka e shredded manalagi nwere ike tinye ha n'ọrụ dum ntutu isi ruo mgbe ezigbo onye na nwa isi. Mgbe nke ahụ na-emechi ntutu na a towel ihe 5-7 awa . Ikpeazụ ntutu itucha ọcha dị ka ọ dị na mbụ .
Nwere ike inyere ịnọgide na -etoju nke hormone makwaara ọbụna n'oge menopause
Ọdịnaya nke boron ẹdude ke apụl nwere ike inyere inyom mempertahaankan makwaara ọbụna etoju n'oge menopause . Nke mere na ọ pụrụ ibelata nnyonye anya kpatara ịbawanye were gwọọ ahaghioke ndị dị otú ahụ dị ka ịda mbà n'obi , ọrịa obi, ọrịa na osteoporosis .
Nwere ike counteract free radicals
Ke apụl ahụ bụ antioxidant phytochemical ọdịnaya nke na-eje ozi iji na-alụ ọgụ free radicals si pollution ma ọ bụ na gburugburu ebe obibi . Nke a nwere ike umi -ebelata ego ọjọọ cholesterol ( LDL ) nke nwere ike ime ka blockage ọbara arịa .
Nwere ike expedite na digestive tract
Na mangosteen mgbe niile nwere ike ime ka a ezigbo mgbaze . Nke a bụ n'ihi na acid ke mangosteen mkpụrụ tartar ike igbu nje bacteria na digestive tract .
Mma maka nri
Apụl bụ ọgaranya eriri ọma maka ndị na-eri. Elu eriri nwere ike ị nọgide na zuru ogologo nke na ahu ike ozugbo ị na- ebughibu .
Apple mkpụrụ bụ ọgaranya vitamin
Ụfọdụ n'ime vitamin ẹdude ke apụl dị ka vitamin A, vitamin B1 , vitamin B2 , vitamin B3 , vitamin B5 , vitamin B6 , vitamin B9 na vitamin C.
I nwere ike na-erepịaghị apụl queried ozugbo ma ọ bụ mee ka n'ime ihe ọṅụṅụ. Olee otú kacha mma n'ụzọ na- Njirimara apụl ka karịa n'ihi juices na nri dị apụl ka emebibeghị na-enweghị egbughị . Jisie !